महालक्ष्मी लाइफ: बजार तरङ्गित पार्ने प्रडक्टसहित आउँदै, सुरुवातमै रु. ५० करोड प्रिमियम लक्ष्य - Khabar Samridhhi
महालक्ष्मी लाइफ: बजार तरङ्गित पार्ने प्रडक्टसहित आउँदै, सुरुवातमै रु. ५० करोड प्रिमियम लक्ष्य
काठमाण्डौँ, खबर समृद्धि न्यूज डेष्क । देशकै कान्छो जीवन बिमा कम्पनीको रुपमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडले सेवा संचालनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।
यो कम्पनीले कारोबार सुरुवातका लागि एक उत्तम दिनको प्रतिक्षा गरिरहेको छ, जुन माघ २७ गते अथवा बसन्त पञ्चमीको दिन हुनसक्छ । ‘बोर्डबाटै निर्णय त भइसकेको छैन, तर हामीले माघ २७ मा पर्ने बसन्त पञ्चमीको दिनबाट कम्पनीको औपचारिक सुरुवात गर्ने योजना बनाइरहेका छौ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले बिजशालासँग भने–‘हामी आक्रामक रुपमा बजारमा आउँदैछौ ।’
भट्टराईको दाबी अनुसार महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले कारोबार सुरुवात गरेको दिनदेखि नै ३ वटा जीवन बिमा पोलिसी(प्रडक्ट) लञ्च गर्नेछ । तीमध्ये २ वटा प्रडक्ट बिल्कुलै नौलो हुनेछन् ।
‘१९ वटा जीवन बिमा कम्पनीको भीडमा महालक्ष्मी नै किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ ।’ सीइओ भट्टराई भन्छन्–‘यस्तो प्रश्न गर्नेहरुलाई हामी हाम्रो नवीन प्रडक्टमार्फत जवाफ दिने योजनामा छौ ।’
उनको दाबी अनुसार महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले २ वटा यस्तो नयाँ प्रडक्ट लञ्च गर्दैछ, जसले नेपालको जीवन बिमा बजारमै नयाँ तरंग ल्याइदिनसक्छ । नेपालको बिमा क्षेत्रमा प्रडक्टहरुको कपीपेस्टको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै ती प्रडक्टहरुको बिषयमा भट्टराईले थप केही खुलाएनन् ।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडलाई २०७४ जेठ ८ गते नै नयाँ १० कम्पनीसँगै एलओआई दिइएको थियो । तर, समयमा पूँजी जुटाउन नसक्दा यो कम्पनीले केही समय लफडा व्यहोर्नुपर्यो । बाधा व्यवधानको अन्तसँगै कम्पनीलाई बिमा समितिले माघ १ गते संचालन लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि नै कम्पनीले कारोबार सुरुवातका लागि आवश्यक तयारी थालेको हो ।
सीइओ भट्टराईका अनुसार प्रडक्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसबाहेकका अन्य सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । विभागीय कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, रिइन्स्योरेन्स एग्रीमेन्ट, सुरुवातमा खुल्ने शाखाको स्वीकृति, प्रडक्ट बनाउन अक्चुअरीको स्वीकृति लगायतका काम भइसकेका छन् ।
यो कम्पनीले आगामी चैतसम्म १३ वटा नयाँ शाखा बिस्तारको लक्ष्य लिएको छ । सुरुवातका यी शाखा राजमार्ग र आसपासका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा केन्द्रीत हुनेछन् । त्यसपछि यही वर्षको असारभित्र १२ वटा शाखा बिस्तार गरिनेछ, ती शाखा चुरेपहाडी क्षेत्रका बढी जनघनत्व भएका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनेछन् ।
सीइओ भट्टराईले मान्छेले हेर्दा ‘वाउ महालक्ष्मी’ भन्ने खालको नवीन प्रडक्ट ल्याउन लागिएकोमा विशेष जोड दिएका छन् । ‘हामी १८ वटा जीवन बिमा कम्पनीकै कपीपेष्ट प्रडक्ट ल्याउन्नौ ।’ उनले भने–‘संचालन भएपछि पनि हामी प्रत्येक ६ महिनामा नवीन प्रडक्ट ल्याउँछौ ।’
उनका अनुसार पृथक प्रडक्टहरु नै लञ्च गर्ने योजना अनुसार कम्पनीले छुट्टै रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट पनि बनाइसकेको छ । अन्य कम्पनीमा यस्तो डिपार्टमेन्ट नरहेको भट्टराईले दाबी गरे । यो डिपार्टमेन्टको काम नवीन प्रडक्टहरुको खोजी मात्र हुनेछ ।
उनले महालक्ष्मी लाइफको प्रत्येक शाखाबाट गुणस्तरीय सेवा दिइने समेत दाबी गरे ।
यस्तै, कम्पनीले जीवन बिमाको सेवा प्रवाहलाई डिजिटाइज्ड गर्ने योजना समेत बनाएको छ । ‘ब्राञ्चलेस बैकिङ भने झै हामी ब्राञ्चलेस बिमा सेवाको संचालनमा समेत जानेछौ ।’ उनले भने–‘बिमा कम्पनीको सेवालाई प्रविधिसँग जोड्नु आजको माग हो । यसलाई हामीले राम्ररी बुझेका छौ ।’
महालक्ष्मीले प्रडक्टको डिजाइन गर्दा धनीलाई मात्र नभई गरीबलाई समेत हेर्ने उनको दाबी छ । ‘गरीब र न्यून आय भएको वर्ग पनि लाभान्वित हुने र सस्तोमा पनि बिमा गर्न सकिने प्रडक्टमा पनि ध्यान दिनेछौ ।’–उनले थपे ।
यो कम्पनीको मुख्य कार्यालय कमलपोखरीमा हुनेछ ।
यो कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये प्रमोटरहरुबाट अहिले १ सय ४० करोड जुटिसकेको छ । ६० करोडको आइपीओ आउनेछ।
कुल ७७ प्रमोटरमध्ये ५ संस्थागत छन् भने बाँकी ७२ व्यक्तिगत छन् ।
संस्थागत प्रमोटरको रुपमा ५ वटा बैंकले लगानी गरेका छन् । मेगा बैंकले २० करोड, ज्योति विकास बैंकले १५ करोड, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले ८ करोड, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले ५ करोड र महालक्ष्मी विकास बैंकले ४ करोड ७५ लाख लगानी गरेका छन् ।
व्यक्तिगत प्रमोटरको रुपमा बैंकर, डाक्टर, इञ्जिनियर, व्यापारी, व्यवसायी लगायतको सहभागिता छ ।
यस्तो छ टार्गेट
कम्पनी सुरुवातको ५ महिनामै ५० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको सीइओ भट्टराईले सुनाए । ‘हाम्रो नवीन प्रडक्टको सहयोगमा यो लक्ष्य हासिल गर्नेछौ ।’–भट्टराई भन्छन् ।
महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सलाई नेतृत्व गरिरहेका भट्टराई आफैं पनि विभिन्न बिमा कम्पनीमा २२ वर्षसम्म निरन्तर सीइओ भएका व्यक्ति हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स समेत उनकै पहलमा स्थापना भएको थियो । बिमा क्षेत्रमा उनको लामो अनुभवका कारण समेत महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले अरुभन्दा राम्रो गर्नसक्ने आशा गरिएको छ । बिजशालाबाट
प्रकाशित मिति : २०७५|१०|१४
[email protected], samrid[email protected]